Nyakhomtsha 2015 – Yintoni aza?
EyoMqungu 1, 2015 ngokuthi umnikelo 3 izimvo
wayefuna nje ukwenza writeup ekhawulezayo ngento iimpawu ezicwangciselwe unyaka ozayo:
Umhleli wohlobo umtya – lo msebenzi malunga 80% ngokupheleleyo ngoku, ukuba sikuvumela ukuba ubone imitya ifakwa kwiziko ledatha yaye enze ezinye iintshukumo abo. Izinto ngoku kunzima kakhulu ezifana ngokususa zonke iinguqulelo ukusuka umguquleli enye iya kuba snap. Lo msebenzi osemqoka kulindeleke ukukhululwa apha kwiiveki ezimbalwa.
Inkxaso widgets kulawulo lifaka – ababhali yesiko widget sele ekhala (ke phofu) malunga nento yokuba ukuphuculwa enyanzelisa ubuyisele lwe widgets. Ingcinga engundoqo iya kuba ukuvumela ezinye iifayile ukuze ahlale apho ukuphepha ukuba udikwe. Oku kwakhona ukuvula i khetho yolawulo widget ezikhuphelekayo leyo eza kuvumela ukuba ukunika ukhetho ngaphezulu widgets ngaphandle xabiso ubungakanani plugin.
umhleli wesiphelo umtya – oku ukwenza ezinye elilujongano imitya kwiphepha, ukuba ngexa “WYSIWYG” uya kuvumela ezinye zokuqhubekeka ngcono, kakhulu malunga ukuhlela imitya meta nezinye imitya efihlakeleyo, abanye intlahla, Kwakhona Ajax iinguqulelo ziya kuba ukuhlelwa emva uphuculo. Lo mntu uza kuthatha iinyanga ezimbalwa ukuba kuza.
inkqubo yenkxaso engu – olu phawu luza aguqulele ngokuzenzekelayo amanani ukusuka kwinkqubo yaseYurophu nenani ukuya isiArabhu and Hindi iinkqubo (kwaye mhlawumbi nosekela-versa). Ayiveli ezibalulekileyo kodwa omhle ndiyeza kamsinya ukuya yokwahlulahlula kufutshane nawe.
WP Menu uhlanganiso – nto inomdla kakhulu benza oku, enokwenzeka, na ku.
Naziphi na izimvo neembono ziya kwamkelwa ngezantsi, ukuba benza into siza ukubongeza somsebenzi yethu. Ukuba ufuna nyani ukukhuthaza inomsebenzisi ukuze Ungaxhasa kweekhowudi, uqhagamshelane nathi ngokusebenzisa ifomu.
EyoMqungu 14, 2015 ngexesha 1:35 mna
Enkosi kakhulu ngomsebenzi wakho nzima ngenxa Iplagi yakho ENKULU!
Akwaba yemveliso mkhulu kum kule New 2015 Unyaka!
Kwaye ndiyacinga uninzi bonke baya kuvumelana nam, angathanda ukubona uhlaziyo embiza 😉
Enkosi kwakhona, @UnathiKondile Kwakweli eyoyikekayo!
EyoMdumba 18, 2015 ngexesha 4:36 mna
Gcina umsebenzi omkhulu, indoda! Ngoko ke ndiyavuya mna ndafumana Transposh kwaye kuya kuqhubeka kunjalo mna bayakuxhasa. Bravo!
steen Grønfeldt uthi
EyoKwindla 6, 2015 ngexesha 4:58 pm
Eli lixesha lokuqala ndibona Java yakho – Ndimele ndikunike jer, nto intle krele! Ndiye ndasebenza ngumguquleli iminyaka emininzi, apha ndiya kuqhubeka ukusebenza – uya kuzama ukunika igalelo yam ngokuphucula iinguqulelo Danish lwephepha!